दसैं, खानपिन र कोभिड संक्रमित पेट नघाउँदासम्म हामी खानेकुरा खान्छौं। तर, खानालाई कटौती गर्ने बानी बसाल्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। विशेषगरी चाडपर्वमा यसको महत्त्व बढी हुन्छ। खानामा कटौती गर्ने बानी नहुँदा नै हामी धेरै खाइरहेका हुन्छौं। बुधबार, असोज २७, २०७८
बदलिँदो मौसममा हुने रोगबाट जोगिने ११ टिप्स झरीपछि टन्टलापुर घाम अनि अब विस्तारै चिसो मौसम सुरु भइरहेको छ। यसरी मौसम परिर्वत हुने बेला रुघाखोकी, ज्वरो, ‘फंगल इन्फेक्सन’, टाइफाइड, मलेरियाजस्ता रोग लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले मौसम परिवर्तन हुने बेलामा स्वास्थ्यबारे बढी सचेत हुनुपर्छ। मंगलबार, असोज २६, २०७८
सुत्केरीका लागि कस्तो भोजन? आमाले गरेको भोजन क्यालोरीमध्ये ६० प्रतिशत क्यालोरी मात्रा दुधमा रुपान्तरण हुन सक्ने भएकाले ४ सय २० क्यालोरीका लागि दैनिक थप ७ सय क्यालोरी आवश्यक पर्नेहुन्छ। आइतबार, असोज १७, २०७८
रेविजः तथ्य बुझौँ, त्रसित नहौँ यस्ता जनावरले टोकेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्यकर्मी संस्थामा गई स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम रेविजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ। रेविज रोगको उपचार नभए पनि समयमै खोप लगाए सजिलै बच्न सकिन्छ। मंगलबार, असोज १२, २०७८
शापू कस्तो रोग हाे, यसका लक्षणहरु के के हुन्? हालसम्म सेतो पुतली(मोथ)लाई शापूको कारण मानिएको छ तथापि कतिपय अवस्थामा भने सेतो पुतलीको संसर्गमा नआएका बिरामीहरुलाई पनि यो रोग देखा परेको छ। बिहीबार, असोज ७, २०७८
यस्ता छन् मौसमी रुघाखोकीका ६ लक्षण र बच्ने ११ उपाय मौसमी रुघाखोकी ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरु बिरामी हुने गर्दछन्। यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखिने गरेको छ। बिहीबार, असोज ७, २०७८
डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स के हो? यस्ता छन् १३ लक्षण डिमेन्सिया मस्तिष्कमा आउने परिवर्तनहरुका कारण हुने तथा क्रमश बढ्दै जाने एक दीर्घकालिन मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। अल्जाइमर्स भने डिमेन्सियाका लक्षणहरु विस्तारै धेरै बर्षहरुमा बिग्रिएर हुने रोग हो। मंगलबार, असोज ५, २०७८
प्रसूतिका समयमा आमा र बच्चालाई सुरक्षित राख्न के गर्ने? त्यसका लागि प्रसूति तयारीबारे स्वास्थ्यकर्मीसँग बसेर योजना बनाउनुहोस्। गर्भावस्था र प्रसवपछिको चिकित्सकीय सेवा जारी राख्नुहोस्। शुक्रबार, असोज १, २०७८
जोर्नीको दुखाइमा व्यायामका यस्ता फाइदा जोर्नीको दुखाइले नियमित दिनचर्या नै प्रभावित हुन्छ र हामी फूलबारी स्याहार्ने, फुटबल खेल्ने, जगिङ गर्ने जस्ता ससाना कुराको आनन्द लिनबाट वञ्चित हुन्छौं। शनिबार, भदौ २६, २०७८
११६६ के हो? किन फोन गर्ने? ११६६ आत्महत्या रोकथामको लागि राष्ट्रिय हेल्पलाइन हो। यो नम्बर आत्महत्या वा आत्महानिको सोच आइरहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी मानसिक अस्पताल लगनखेल र टिपिओ नेपालद्वारा सञ्चालन गरिएको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर हो। शनिबार, भदौ २६, २०७८
निपा भाइरस के हो, कसरी जोगिने? निपा भाइरस संक्रमणको लक्षण फरक–फरक हुने गरेको पाइएको छ। कोही ब्यक्तिहरुमा यस भाइरसले कुनै पनि लक्षण बिना नै संक्रमण गर्न सक्छ भने कुनै ब्यक्तिहरुमा सामान्य श्वासप्रश्वास प्रणालिमा समस्या ल्याउने देखि खतरनाक इन्सेफलाइटिस सम्मको लक्षण देखा पर्न सक्दछ। शुक्रबार, भदौ २५, २०७८
महिनावारी भएको बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पहिलो पटक महिनावारी हुँदा धेरै किशोरीहरु आत्तिने गर्छन् र केहीले रोग लाग्यो भनेर सोच्छन्। तसर्थ घरमा भएका अभिभावकहरुले यसबारे जानकारी दिनुपर्छ। शुक्रबार, भदौ २५, २०७८
आज दर खाने दिन: कस्तो खानेकुरा खाने, कस्तो नखाने? महिलाहरुका लागि तिजको रमाइलो भनेकै दर खाने, पानी समेत नखाई ब्रत बस्नु अनि नाचगान गर्नु नै हो। तर चिकित्सकहरुका अनुसार दरका नाममा अघिल्लो दिन टन्न खाने र भोलिपल्ट पानी समेत नखाई ब्रत बस्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै खराब हो। बुधबार, भदौ २३, २०७८
दाँत बिगार्ने १८ बानी हाम्रा केही यस्ता बानी हुन्छन्, जुन हामीलाई स्वस्थकर लागे पनि स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। हामीले ख्याल नगरेका हाम्रा केही बानीले दाँत बिगार्न सक्छन्ः सोमबार, भदौ २१, २०७८
‘आनो’ले सताउँछ? यस्ता छन् रोकथाम र उपचार विधि सुरुसुरुमा सामान्य त हो नि भनेर समयमै उपचार नगर्दा पछि जटिल समस्या निम्तिन्छ। आँखाका विभिन्न समस्यामध्ये एउटा हो, ‘स्टाइ’ अर्थात् बोलिचालीको भाषामा ‘आनो’, जुन ‘स्टेफिलोकोकस ब्याक्टेरिया’को संक्रमणका कारण हुन्छ। सोमबार, भदौ २१, २०७८
मोटोपन घटाउन के गर्ने के नगर्ने? शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसत तौलभन्दा शारीरिक तौल बढीहुनुलाई मोटोपना भनिन्छ। कसको कति तौल हुनुपर्छ भनी पत्ता लगाउने केही उपायहरू छन्। सेन्टिमिटरमा लिएको आफ्नो उचाइबाट महिला, पुरुष दुवैका लागि १०० घटाउँदा आएको अंकलाई आवश्यक अधिकताम किलोग्राम तौल मानिन्छ। शुक्रबार, भदौ १८, २०७८
डेंगुबारे यी कुरा जानी राखौँ डेंगु एडिस एजिप्टाइ जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ। सामान्य उपचारले निको हुने भएपनि हेलचेक्रयाइँ गर्दा ज्यानै जाने गरेको छ। बिहीबार, भदौ १७, २०७८
आङ खस्नुका १४ कारण र ९ लक्षण चिकित्साशास्त्रको दृष्टिकोणले आङ खस्नाको मुख्य कारण सानो पेटभित्रका अङ्गहरुलाई अड्याइराख्ने मांसपेशी कमजोर भएर खुकुलो हुँदै जानु हो। हाम्रो समाजमा महिलाको आङ खस्नुमा विविध सामाजिक कारणहरु पनि जोडिएका छन्। शनिबार, भदौ १२, २०७८
यी हुन् निद्रा गडबड हुने ७ कारण र जोगिने ९ उपाय उमेरले २० वर्षको हाराहारीमा रहेको एक स्वस्थ व्यक्ति दिनमा आठ घण्टा सुत्नुपर्ने हुन्छ। तर, जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति निद्रा घट्दै जान्छ। उमेर अनुसार मस्तिष्कको परिपक्वता बढ्दै जाने भएकाले निद्रा पनि उमेर अनुसार फरक पर्ने हुन्छ। शनिबार, भदौ १२, २०७८
के कोरोना खोप लगाउन नपाएका विद्यार्थीहरु परीक्षामा सामेल हुन पाउँछन्? स्वास्थ्य मन्त्रालयले उमेर नपुगेर, कुनै स्वास्थ्य समस्या भएर वा अन्य कारणले खोप लगाउन नपाउने विद्यार्थीहरुले पनि कुनै बाधा बिना परीक्षा दिन पाउने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार, भदौ ११, २०७८
के हो निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोग? यसका प्रमुख ५ कारण निदाएका बेला सास रोकिनुलाई डाक्टरी भाषामा ‘स्लिप एप्निया’ भनिन्छ । निदाएका बेला कैयौंपल्ट केही सेकेन्डका लागि सास फेर्न रोकिन्छ। मंगलबार, भदौ ८, २०७८
गर्मीमा के के खाँदा फाइदा हुन्छ? अर्को एउटा अनुसन्धानले एक कप गाजरको जुस १० देखि १२ हप्तासम्म नियमित खाने मानिसको छालामा घाममा पाइने विकिरणले हानि पुर्‍याउने जोखिम ५० प्रतिशत कम भएको पत्तालगाएको थियो। आइतबार, भदौ ६, २०७८
ब्राउन राइसको अनेकौँ फाइदा ब्राउन राइस सेतो चामलको तुलनामा निकै स्वस्थकर मानिन्छ। किनकी यो कम प्रशोधित हुन्छ। सामान्यतया सेतो चामल बनाउन धेरै प्रशोधन गरिन्छ। शनिबार, भदौ ५, २०७८
के कोरोना खोप लगाएपछि कुनै असर देखिएन भने खोपले काम गर्दैन? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि कुनै पनि असर नदेखिएमा खोप काम गर्दैन भन्ने कुरा भम्र मात्र हो। शुक्रबार, भदौ ४, २०७८
कोरोना संक्रमण भई निको भइसकेका व्यक्तिले पनि कोरोना खोप लगाउनुपर्छ? एकपटक कोरोना लागिसकेका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ र यो सुरक्षा कति समयसम्म रहन्छ भन्ने पनि अहिलेसम्म एकीन गर्न सकिएको छैन। बिहीबार, भदौ ३, २०७८
एपेन्डिसाइटिस: कारण, लक्षण र उपचार जो कोहीलाई पनि एपेन्डिसाइटिसको समस्या हुन सक्दछ। तर यो १० देखि ३०वर्षको उमेरका बीचमा बढी देखा पर्दछ र पुरुषमा भन्दा बढी महिलामा सामान्य हुन्छ। बुधबार, भदौ २, २०७८
पुरानो मास्कलाई सही तरीकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने? खोलिसकेपछि मास्कलाई प्लाष्टिकको झोलामा सजिलै खोल्न नमिल्ने गरी बाधेर राख्ने, संक्रमित व्यक्तिले लगाएको वा संक्रमित व्यक्तिसँग सम्र्पकमा आउँदा लगाइएको मास्कलाई दुई तहको झोलामा राख्ने मंगलबार, साउन २६, २०७८
कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिले दोस्रो मात्रा लगाउन पहिलेकै खोप केन्द्रमा जानुपर्छ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउने व्यक्ति जुन स्थानमा छ त्यँही नजिकको खोप केन्द्र गई गई पहिलो मात्रा लगाएको खोप कार्ड देखाएर खोप लगाउन सकिने जनाएको छ। सोमबार, साउन २५, २०७८
के बालबालिकाले मास्क लगाउनुपर्छ? ५ वर्ष मुनिकालाई किन नलगाउन भनिन्छ? ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मास्क लगाउदा र्‍याल तथा सिगान निस्कने, नाक बन्द हुनेसक्ने र बालबालिकाले मुखमा लगाएको मास्क मुखभित्र हाल्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई मास्क लगाइदिनु भन्दा भिडभाडबाट जोगाउन उपयुक्त हुन्छ। सोमबार, साउन २५, २०७८
यस्ता छन् मास्क लगाउँदा बारम्बार हुने पाँच गल्ती र ख्याल गर्नुपर्ने ४ कुरा मास्कको मास्क प्रयोग गर्नाले एकातर्फ अन्य व्यक्तिको नाक र मुखमार्फत तपाईंको शरीरमा आउन सक्ने भाइरसबाट बच्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ यदि तपाईं संक्रमति हुनुहन्छ भने तपाईंबाट अन्य मानिसमा संक्रमण सर्दैन। शुक्रबार, साउन २२, २०७८